Tandremo ny Finoana, Martsa Forward -Celebrating faha-11 taonan'ny an'i Shandong Senmao milina Co., Ltd - China Shandong Senmao milina
Tandremo ny Finoana, Martsa Forward -Celebrating faha-11 taonan'ny an'i Shandong Senmao milina Co., Ltd
Tamin'ny faha-14 May, 2018, mba hankalaza ny llth taonan'ny Shandong ny fametrahana ny milina Senmao Co., Ltd, ny mpitari-draharaha, Atoa Dexue Ma, nanangana ny mpizaha tany any an-tendrombohitra Tai. Izany ihany koa ny isan-taona ny orinasa iombonana Travel ny fotoana.
Shandong Senmao milina Co., Ltd dia Integrated orinasa izay manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny varotra ny hazo ara-tontonana fitaovana milina. Ny tena vokatra: mafana gazety milina, mangatsiaka gazety milina, mandeha ho azy gitara hanjaka milina, mandeha ho azy sisiny trimming tsofa, tontolo iainana biraom-pamokarana sy ny hafa maro karazana ny famokarana andalana.
Tsy manaraka ny avo iaingana fitaovana famolavolana, kalitao avo fepetra, fitsipika ambony tolotra sy miezaka ny hampiasa ny teknolojia avo sy ny mahaolona services, mba nahary izao tontolo izao-kilasy marika.
Manantena izahay ny vokatra dia afaka mamorona vaovao ho fahagagana ny fampandrosoana ny asa.
Tsy andrinay ny fiaraha-miasa maharitra eo aminareo amin-kitsimpo!
Post fotoana: Jul-05-2018